स्वास्थ्य मन्त्रालय : आफू गतिलो गर्छ न विज्ञले भनेको मान्छ « AayoMail
सरकारले ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा छ’ भन्दाभन्दै संक्रमितको संख्या १ लाख नाघिसकेको छ। बिहीबार मात्रै देशभर ४ हजार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो।
विश्वका धेरै राष्ट्रले कोरोना नियन्त्रण गरिरहँदा नेपालमा भने संक्रमण वृद्धि उच्च गतिमा बढिरहेको छ।
हरेक महामारी वा संक्रमण नियन्त्रणमा सबैभन्दा धेरै कुरा सुन्नुपर्ने ‘विज्ञ’ हरूको हो।
यो त झन् विश्वव्यापी महामारी हो। यही कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको विश्व ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने पनि हरेक सरकारले विज्ञकै कुरा सुन्छन्, उनीहरूसँगै छलफलमा हुन्छन्।
तर, नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले मात्रै कोरोना नियन्त्रणको ‘ठेक्का’ लिएजस्तो गर्छ तर, केही गर्दैन।
नेपालमा माघ ९ मा पहिलोपटक संक्रमण देखापरेको थियो।
तर, हालसम्म मन्त्रालयले विज्ञ टोली बनाएर काम गरेको छैन। मन्त्रालयको मात्रै एकलौटी अपरिपक्व निर्णयले नियन्त्रणमा पटक-पटक चुक्दै आएको विज्ञहरूको आरोप छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हालसम्म पनि विज्ञ टोली बनाएर काम गरिएको छैन।
उनका अनुसार बेलाबेला दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग मात्र छलफल हुने गरेको छ। तर, औपचारिक रूपमा टिम राखेर कुनै छलफल हुने गरेको छैन।
अर्थात, मन्त्रालय अनि सरकारसँग कुनै त्यस्तो ‘टास्कफोर्स’ छैन। जसले कोरोना नियन्त्रणको ‘कमान्डिङ’ गरोस्।
कोरोना महामारीसँग लड्न पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि विभिन्न विषयमा चुक्दै आएको छ। अबको केही सातामा नै भयावह अवस्था आउने विज्ञहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन्।
कोरोना माहामारी फैलिएको आठ महिना बितिसक्दा विज्ञहरूसँग मन्त्रालयले तीनपटक मात्रै छलफल गरेको छ, त्यो छलफलका सल्लाह अनि सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझावलाई समेटर काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्।
‘आठ–दसजनाको प्राविधिक टास्कफोर्स बनाएर काम गरेको भए नेपाल कोरोना नियन्त्रणमा अगाडि हुन्थ्यो,’ डा. मरासिनीले भने, ‘मन्त्रालय आफैंमात्र गर्छु भन्ने हिसाबले हिँडिरहेको छ।’
महामारी नियन्त्रण गर्न हरेक साता विज्ञहरू बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक छ तर, मन्त्रालयबाट त्यो काम हुन सकेको छैन।
‘प्राविधिक टास्कफोर्सले दिएको सुझाव मन्त्रालयले स्विकार गरोस्। हरेक साता कहाँ, के गल्ती भयो, कहाँ राम्रो भयो भनेर समीक्षा हुनुपर्छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘राम्रो भएको कुरालाई बढाउँदै लैजाने र गल्ती भएको हटाउँदै लैजानुपर्ने हो। तर, मन्त्रालय एकपछि अर्को गल्ती छिपाउँदै गइरहेको छ।’
सरकारले सुरुदेखि नै नियन्त्रणका लागि बनाएको मापदण्ड परिपक्व रूपमा निर्णय हुन नसक्दा आज यो परिस्थित आइपरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन्।
‘महामारीमा कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने सल्लाह दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोही विज्ञ छैनन्। सरकार अहिले कुहिरोको काग जस्तै काम गरिरहेको छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘यस्तो बेलामा इपिडिमियोलोजी ट्रेन्डलाई फलो गर्नुपर्थ्यो तर हुनसकेन।’
‘मन्त्री तथा सचिव ननमेडिकल भए पनि मन्त्रालयमा केही उच्च पदाधिकारी मेडिकल क्षेत्रकै छन्। उनीहरूले सल्लाह नदिएका हुन् या सल्लाह दिएर पनि नमानेका हुन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा भएका व्यक्ति–व्यक्तिको लडाइँ र अपरिपक्व निर्णयले यो अवस्था आएको छ।’
यति बेला कोरोना उपचारको फ्रन्टलाइनमा रहेर चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन्। तर, हालसम्म पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी संगठनलाई एकपटक पनि छलफलमा बोलाएको पाइएको छैन।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजाल मन्त्रालयले छलफलको लागि नबोलाएको बताउँछन्।
‘सरकारले हामीसँग किन यति धेरै पूर्वाग्रह राखेको छ। हामीलाई नै बाइपास गर्नुपर्ने कारण के हो सरकारलाई थाहा होला,’ डा. रिजालले भने, ‘स्वास्थ्थ मन्त्रालयले हाम्रो सुझावलाई लिएको छैन। जुन विडम्बना हो।’
‘कोरोना अघि–अघि सरकार पछि–पछि कुदेको जस्तो भएको छ। सुरु–सुरुमै चुक्दै आएको हुनाले त्यसलाई सच्च्याउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘आफू पनि नजान्ने र अर्कोले भनेको पनि नमान्नेसँग डिल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।’
डा. प्याकुरेलको कुरामा सहमति जनाउँदै डा. मरासिनी भन्छन, ‘नेतृत्व तहमा बसेका मानिसले जुन निर्णय गर्न मन लाग्यो त्यही गरेका छन्। आफूलाई जानकारी छैन भने बाहिर भएको विज्ञको सहयोग माग्नुप¥यो नि?’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले केही दिनअघि कोरोना अपडेटमार्फत बिरामीलाई ‘बेहोस हुने’ जस्तो भएपछि मात्र आउन अनुरोध गरेका थिए।
जुन विषयमा विज्ञहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
डा. प्याकुरेल मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो भन्ने अधिकार नभएको बताउँछन्।
‘स्वास्थ्य सेवा लिने अधिकार जनताको हो। संविधानमा उल्लेख भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जनताको मौलिक हकको विरुद्धमा बोल्दा कानुन लाग्छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘यस्तो कुरा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई समेत छैन।’
प्रवक्ताजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेको भनाइ समग्र मन्त्रालयको भनाइ हो। यस्तोमा मन्त्री तथा सचिवले खण्डन गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने जनतामा नराम्रो छाप पर्ने उनको भनाइ छ।